व्रत बस्दा साबुदाना खानु शाकाहारी कि मांसाहारी ? - ज्ञानविज्ञान
महिलाहरु ब्रतमा धेरै जसो फलफुल खाने गर्दछन तर व्रतमा हरेक घरमा साबूदाना खानु सामान्य हो । कयौं क्षेत्रमा यसलाई प्रसादको रुपमा पनि चढाइन्छ । तर तपाईले व्रत र धार्मिक कार्य गर्दा खाने साबूदाना शाकाहारी नभई मांसहारी भए ?
Don't Miss it प्याज खानुका यी फाइदा थाहा पाए पछि भन्नु हुनेछ, गनाएर के भो त ?
Up Next ‘खतरनाक’ अश्लिल चलचित्र हेर्ने भन्दा,अश्लिल तस्विर हेर्नु